မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ဖို့ အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့ အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်လှုပ်ရှား - YOYARLAY Digital Media and News
မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါး သတ္တဝါအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးကြဖို့ လှုပ်ရှားမှုမှာ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေ ကျက်စားတဲ့ မန္တလေးမြို့ကနေ ဗန်းမော်မြို့ကြားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ ဧရာဝတီလင်းပိုင် ၇၉ ကောင်ပဲ ကျန်ရှိတော့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်း ဧရာဝတီလင်းပိုင် ၆ ကောင် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေ သေဆုံးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ တရားမဝင် ရှော့တိုက်ငါးဖမ်းမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း၊ သရုပ်ဆောင်/အဆိုတော် ထွန်းထွန်း၊ အဆိုတော် ပိုပို၊ မော်ဒယ် ထားထက်ထက်၊ သရုပ်ဆောင် စံရတီမိုးမြင့်၊ မော်ဒယ် အောန်ဆိုင်းတို့ အပါအဝင် အနုပညာရှင်အများအပြားက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပရိုဖိုင်ပုံ ချိန်းတာ၊ လူအများ သတိထားမိလာစေမယ့် စာသားတွေ ဝေမျှဖော်ပြတာမျိုး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆိုတော် ပိုပိုက”ဧရာဝတီလင်းပိုင်လေးတွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ ရှားပါးမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်။ ရေချိုလင်းပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တကယ်ကို တစ်ဦးတည်းသော ရှားပါးမျိုးစိတ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပိုပိုတို့တင်မကဘူး လူတွေအကုန်လုံးက ကာကွယ်ပေးသင့်တယ်။ ကယ်တင်ပေးသင့်တယ်။ ဒီလိုလျှပ်စစ်ရှော့ရိုက်တာတွေလည်း မလုပ်စေချင်ဘူး။ ဒီလင်းပိုင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိထိရောက်ရောက်လေး အာဏာပိုင်တွေက လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ လူဆိုတာကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနေလို့ရတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ဘူး။ လူဆိုတာက တိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့နေမယ် အပင်လေးတွေရှိမယ်။ သဘာဝတွေနဲ့ နေဖို့ဖြစ်လာတာပါ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဒီကမ္ဘာကြီးကို မပိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် သတ္တဝါလေးတွေကို ဖမ်းပြီးတော့ သတ်ပြီးတော့ ချက်စားတာတို့ မလုပ်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကတည်းက ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ကျက်စားခဲ့ကြတဲ့ လင်းပိုင်တွေကို ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေလို့ အစွဲပြုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပြီး လူသားအကျိုးပြု ဧရာဝတီလင်းပိုင်လို့လည်း တင်စားကြပါတယ်။ ဧရာဝတီလင်းပိုင်နဲ့ လက်ပစ်ကွန်ရေလုပ်သားတို့ ပူးပေါင်းငါးဖမ်းတဲ့ သဘာဝဓလေ့စရိုက်ကြောင့် အဲဒီလိုတင်စားကြတာပါ။ နို့တိုက်သတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အချိန် ၁၄ လ ကြာမြင့်ပြီး တစ်ကြိမ်မှာ ၁ ကောင်သာ မွေးဖွားလေ့ရှိသလို ၇ နှစ်ကနေ ၉ နှစ်သား အရွယ်ကျမှမျိုးပွားနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်တာပါ။ နိုင်ငံ့ရတနာလို့ တင်စားကြတဲ့ ရှားပါးမျိုးစိတ် ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ နိုင်ငံသားအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Previous Previous post: ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ဆံသားပျက်စီးအောင် လုပ်မိတဲ့ အမှားများ
Next Next post: နှာခေါင်းစည်းတွေကို ဓာတ်ဆီနဲ့ ပိုးသတ်ကြဖို့ ဒူတာတေး ထပ်ပြော
Mask မတပ်ဘဲ အပြင်ထွက်တဲ့သူတွေကို ငွေဒဏ်ရိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ဆို
ရန်ကုန် အောက်တိုဘာ ၅ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ရောဂါပိုးပြန့်ပွားမှုများနေတဲ့အပြင် Mask မတပ်ဘဲ လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာကို သွားနေတဲ့ အတွက် Mask မတပ်ဘဲ အပြင်ထွက်တဲ့သူတွေကို ငွေဒဏ်ရိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။”ဈေးတွေလို လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေကို သွားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့…
Published: October 5, 20209:30 am Updated: October 6, 20209:39 am
လူပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်အထိ လာရောက် ဆော့ကစားပြီးဖြစ်တဲ့ Breakout Yangon ရဲ့Surreal Escape Experience Game
အားလုံးကို မေးရဦးမယ်… စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်း (၂) ယောက် ကနေ (၈) ယောက်လောက်ထိများ ရှိကြလား? အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေ အတူပေါင်းပြီး ခေါင်းအတော်စားရမယ့် mission တွေကို အချိန် တစ်နာရီအတွင်း ဖြေရှင်း ကျော်ဖြတ်ကြည့်ချင်လား? Post…
Published: April 3, 20187:32 am